ကြံ့ဖွံ့ ကိုကြောက်လို့ပါ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြံ့ဖွံ့ ကိုကြောက်လို့ပါ ။
ကြံ့ဖွံ့ ကိုကြောက်လို့ပါ ။
Posted by ba gyi on Oct 29, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
ဦးကုလားကြီးအသက်ငင်နေတာတော်တော်ကြာပြီ၊ ခုဆိုတစ်လလောက်ရှိရောပေါ့၊ အသက်ကလည်း(70)ကျော်(80)နီးပါး၊ခံစားနေရတဲ့ရောဂါကအဆုပ်ကင်ဆာ နောက်ဆုံး အခြေနေမို့ဆေးရုံကလက်မခံတော့၊အိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ရသည်တဲ့၊ ဖုတ်ဝင်နေသလေားလို့အိမ်သားတွေ သံသယ၀င်ပြီ၊ သူ့အိပ်ယာခင်းအောက်ကို သူ့ဖိနပ်ပြောင်းပြန်ထည့်သည်– အသက် ကမထွက်၊ သူအိပ်ယာ ဖျာအောက် ကို သြဇာရွက်ထည့်ကြသည်—- ထိုအသက်ကမဖြုံ၊အိမ်သားတွေ လူနာပြုရစုလို့အိပ်ရေးမပျက် ဖုတ်ဝင်သလားလို့ ထထ ချောင်း ရလို့ပျက်ရပြီ၊ သူ့ခဗျာလည်းမနဲခံစားနေရပြီ။
သူ့သားကြီးဆို လက်ရှိ ရပ်ကွက်ထဲမှာမှာပူပူနွေးနွေးကြံ့ဖွတ်ချုပ်ရေးမှုး၊ ဦးကုလားအတွက်၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့သားတွေလာလာမေးကြသည်၊ အဖိုးဘယ်လိုလဲ– အဖိုး ဘယ်လိုလည်းပေါ့၊ သူသေလျှင် နာရေးကိစ္စပူစရာမလို ၊ဆရာဝန်မှ တစ်ပတ်သာလိုတော့သည်ဆိုကတည်းကပြင်ဆင်ပြီးသား၊ ဒါပေမည့် အခု(1)လတောင်ရှိရော့မည်၊ သူ့ သား ကြီးခေါင်းစားရပြီ၊ သူ့အဖေတော်တော်ခံစားနေရသည်ကိုး။
အကြောင်းတော့ရှာရတော့မယ်၊ တစ်ခုရှိတာက သူ့အဖေဦးကုလားကြီးသည် သူသေလျှင်မီးရှို့မှာအလွန်တွေးကြောက်သည်၊ဒါလည်းသူတို့ကိုကာယကံရှင် ဦးကုလား ကြီးမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးသား၊မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်ရန်လည်းမှာပြီးသား၊သူ့ကိုယ်သူ အဲလောက်ထိပြင်ဆင်ထားသော ဦးကုလာကြီး၊ဘာကြောင့်အသက်မထွက်သေးတာပါလိပ်။
သည်နေ့သူ့မွေးနေ့ထပ်ရောက်ပြန်ပြီ၊ စောင့်ကြည့်ရမည်၊ ည (12)နာရီသာကျော်သွားပြီ၊ ဦးကုလားကြီးကသည်အတိုင်း။ သည်တော့ သူ့သားကြီးက ဆုံးဖြတ် ချက် တစ်ခု မြန်မြန်ချလိုက်ပြီ၊ သူ့အဖေနားတိုပြီး နားနားကပ်ကာပြောရတော့သည်၊ အဖေ– သည်လောက်မခံစားပါနဲ့—- အားလုံးစိတ်ချသွားပါ— အဖေ့စိတ်တိုင်းကျအောင်
သားတို့အဖွဲ့ မှပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ပြောတော့- အံ့သြ စရာ-အနှီ ဦးကုလားကြီး မိန်းမောနေရာကငေါက်ကနဲ ထထိုင်ပြီး၊ သူ့သားကို မျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်းပြောလိုက်ပုံက
—– အဲ အဲ တာ ငါတွေးနေတာ– မင်းတို့ ကူညီရင် ငါ့အုတ်ဂူမှာ——ငါ့နာမည်မတပ်ပဲ– မင်းတို့အဖွဲ့နာမည်ရေးသွားမှာစိုးလို့ပါ ဟူသတည်း။
ကိုဘ နော် ကိုဘ ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်း
ကြိုက်တယ်ဗျို. ပိုဒ်ကတော. စာလေး 10 ကြောင်းလောက်နဲ. အရိူက်ထိအောင်
ရေးသွားနိုင်တယ်.. ဟီး အလို.ပိုဒ်တွေ.ဆက်ရေးဖို.တိုး၂လေးအားပေးနေမယ်နော်.:)
နာမည်တွေ တန်းစီ ရေးပြီး တန်းစီသေကြတော့ လဲ အေးတာဘဲ
ရွေးကောက်ပွဲနီး၊လမ်းတွေခင်းတော့၊စည်ပင်မှချပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြည်သူ့ထံမှ တစ်အိမ်တက်ဆင်း
ပန်းရံ နဲ့ အလုပ်သ္မားခဆိုကောက်ပြီး၊ လမ်းပြီးတော့-( ကြံ့ဖွတ် အဖွဲ့ဝင်များ၏လုပ်အားဖြင့်ခင်းသည်)ဆိုပြီး
အရှက်မရှိ ဆိုင်းဘုတ် (ဆိုင်းဘုတ်တောင်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအခိုင်အမာ) ထောင်ကတည်းက၊ အဲလို အောက် တန်း ကျ တဲ့လုပ်ရပ်တွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့တွေးနေတာ– ၊ ပြည်သူအပေါ်မျက်ခုးံမွှေးစင်္ကြန်ဆက်မရှောက်စေ
လိုသဖြင့်၊ အပြုသဘောဖြင့်ရေးလိုက်ရပါသည်။လေးစားရသော သမ္မတကြီးရေ ကြံ့ဖွံ့မိုးခါးရေထဲ ရောပါသွား
ရင်ခွင့်လွှတ်ပါ နော် — နော်လို့။
သွား…….. လူဆိုး …
ကိုကိုဆိုး ကြီး က ဖွံ့ နဲ့ ဖွတ်နဲ့ မှားတာကိုကြောဒါလားဟင်—၊
အဲဒါ—— ခေါင်းစဉ်လေးမို့ ချမ်းသာပေးထားတာလေ–။
ဖွတ်လေးတွေကို ပြောချင်တာပြော၊ ဖွတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတော့ ချမ်းသာပေးလိုက်ပါ ဂျ။